Xiisad u Dhaxeeya Ciidanka Itobiya [new police] iyo Dadweynaha Deegaanka Ceel-dibile – Rasaasa News
Jul 10, 2010 Xiisad u Dhaxeeya Ciidanka Itobiya iyo Dadweynaha Deegaanka Ceel-dibile
Godey – July 10, 2010. Xiisad u dhaxaysa Ciidamada Militariga dawladda Itobiya iyo ciidamo deeganka ah ayaa shalay galinkii dambe ka soo cusboonaaday deegaanka Ceel-dibile oo ka tirsan dhulka Ismaamulka Somalida Ogadeeniya.
Xiisadan ka jirta tuulada Ceel-dibile oo ka tirsan gabalka Shabeele ee dhulka Ismaamulka Somaalida xigtana xuduuda dhinaca gabalka Galgaduud Somaliya, yaa timid ka dib kolkii ciidamo ka tirsan dawlada Itobiya ee New Police, dhawaan ay soo buuxdhaafiyeen tuulada, kuwaas oo dadka deegaanka ku amray in loo soo gacan galiyo labo gaari oo kuwa Xamuulka qaado ah oo maalintii shalay gaarsiiyay tuulada raashin iyo agabyo kala duwan.
Dadka deegaanka ayaa ka biyo diiday amarka ka soo baxay Ciidamada Itobiya taasi oo keentay in israaseyn halkaasi ay ku dhexmarto ciidamo deegaanka ah iyo ciidanka Itobiya, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhasheen qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ciidamada Itobiyan ee tuulada yimid ayaa u badan Somali, waxaa la sheegay in ay wali raadinayaan gaadiidkii raahsinka geeyay tuulada. Ciidamada dawlada Itobiya ayaan ku ogayn tuulada ciidamo kale oo aan ahayn iyaga, Dadwaynaha deegank ayaa haatan wada dadaalo ay ku xoojinayaan ciidamada ka soo horjeestay amarka Ciidanka Itobiya.
Ciidamada New Police-ka ayaan iyagu gali karin tuulooyinka ka tirsan Ismaamulka Somalida ee xiga dhinaca xuduuda Somaliya.
Dagaalkii shalay ayaa keenay khasaare dhimasho oo gaadhaya 1o ruux labada dhinacba, waa markii labaad ee ciidamada New Police-ka ay ka horyimaadaan dadweynaha degan xuduuda dhinaca Somaliya. Dagaalka maanta dhacay ayaa ku fiday tuulooyin dhawra walina waa uu socdaa, khasaaraha dhimashada ee maanta ayaa ah 2 ruux, dhaawac 11 ruux ahna waxaa la geeyey Isbitalka Caabud waaq.
Dhinaca kale ciidamada New Police-ka ayaa dhibaatooyin ba,an oo aan meel loo raaco lahayn ku haya dadweynaha degan magaalooyinka waaweyn ee Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, meesha ayna ka tagi karin magaalooyinka xuduuda ku yaal.
wixii ka soo kordha dagaaladan kala soco rasaas.com